But to make them pal - Anglais - Birman Traduction et exemples
Vous avez cherché: but to make them palatable , (Anglais - Birman)
Bangalore is the ability to make pain
ဤ ကြော်ငြာချက်ကို နှစ်သက်ရာ ဖြစ်စေရန် ကလစ်ပါ
ထိုသို့ပြုသော်လည်း၊ မခံမယူပိုင်သောကြောင့် ပြုသည်မဟုတ်။ သင်တို့လိုက်စရာဘို့ ပုံသက်သေဖြစ် စေခြင်းငှါပြုကြ၏။
ယဇ်ကောင် တို့ကိုသတ်သောအားဖြင့် မိမိတို့အပြစ်ကို များပြားစေကြ၏။ ထိုကြောင့်၊ ငါသည် ထိုသူအပေါင်းတို့၌ အပြစ်ဒဏ် ပေးမည်။
ဆုံးမပြစ်တင်သောသူတို့မူကား၊ စိတ်သာယာလျက်၊ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံလျက်ရှိကြ လိမ့်မည်။
ယနေ့အထိ ၀ါရင့်ချက်လုပ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် မာရှီဒါသည် အလုပ်သမားများနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို ကြပ်မတ်ရုံ၊
သင်တို့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့ မဝင်ရကြဟု ကျိန်ဆိုတော်မူသော သူတို့ကား၊ မယုံကြည်သော သူမှ တပါး အဘယ်သူနည်း။
အပြစ်ဖြေခြင်းကို ပြုအံ့သောငှါ၊ ဆိတ်သငယ် တကောင်ကိုလည်း ပူဇော်ရမည်။
Eventually, after not finding anything, I decided to make my own.
ကြော်ငြာမပါဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိမယ့် ဓာတ်မီးပရိုဂရမ်ကို လိုက်ရှာရင်းနဲ့ အကြံရခဲ့တာလေ။
ထိုနည်းတူ၊ မိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းတော်အားဖြင့် သူတို့ကိုညှဉ်းဆဲ၍၊ ပြင်းစွာသော လေတော်အားဖြင့် ချောက်လှန့်တော်မူပါ။
ယောသပ်ကလည်း၊ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်တော်၌ အားနည်းသော အရပ်ကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါ လာကြပြီဟု ဆိုပြန်၏။
သူတို့က၊ မဟုတ်ပါသခင်။ ကိုယ်တော်၏ကျွန်တို့ သည် အစာကို ဝယ်ခြင်းငှါသာ လာကြပါ၏။
Thailand's health officials are encouraging people to make cloth facemasks at home and wash them daily.
ထိုင်းနိုင်ငံ ကျန်းမာရေး အရာရှိများက ပြည်သူများအား နေအိမ်တွင် အဝတ် နှာခေါင်းစည်းများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို နေ့စဉ် လျှော်ဖွပ်ရန် တိုက်တွန်းနေပါသည်။
ထိုမှတပါး၊ သင်၏ရန်သူတို့ကို သင်၏ ခြေတင်ရာ ငါချမထားမှီတိုင်အောင် ငါ့လက်ျာဘက်၌ ထိုင်နေ လော့ဟု၊ အဘယ်မည်သော ကောင်းကင်တမန်ကို တခါမျှ မိန့်တော်မူဘူးသနည်း။
အိမ်တော်ကိုစောင့်၍၊ အိမ်တော်၌ ခပ်သိမ်း သောအမှုတို့ကို ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါ ငါခန့်ထားမည်။
ထိုစကားကို ကြားသောနေ့နောက်မှ၊ လင်သည် ပယ်အံ့သောငှါ ပြုလျှင်၊ မယားအပြစ်ကို ကိုယ်တိုင် ခံရမည်။
ရခဲ့သောဥစ္စာသည် လုပ်ရှိသမျှကို ပြီးစီးလောက်ရုံမျှမက ပိုလျက်ရှိသတည်း။
အမျက်တော်ကိုခံစေခြင်းငှါ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ခန့်ထားတော်မူသည်မဟုတ်။ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ပိုင်ရစေခြင်းငှါ ခန့်ထားတော်မူ၏။
wearing uniform (Anglais>Tagalog)training seminar (Anglais>Tagalog)way to go (Anglais>Tagalog)aaj main bahut bahut udaas hu (Hindi>Anglais)aap ka number do (Hindi>Anglais)i asked you so many times (Anglais>Hindi)risposta automatica (Italien>Anglais)ons gaan huistoe (Afrikaans>Anglais)liang folikel (Malais>Chinois (simplifié))what are you doing foraliving in tagalog (Anglais>Tagalog)mohm (Italien>Anglais)tulsi leaves plant in tagalog (Anglais>Tagalog)ni chi fan le ma (Chinois (simplifié)>Anglais)come join me (Anglais>Français)pendapatan bersih (Malais>Chinois (simplifié))forced to shoulder the household chores (Anglais>Malais)united (Anglais>Tagalog)te ora pai (Maori>Anglais)बिपी विडीयो बिपि (Hindi>Anglais)aag jal rahi hai (Hindi>Anglais)dipanah petir (Malais>Chinois (simplifié))cunt (Anglais>Gallois)aap duty pe ho kya (Hindi>Anglais)7 habits of highly effective people (Anglais>Tagalog)ni shuo shen me (Chinois (simplifié)>Anglais)